घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू मोइसेस कैसेडो बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मोइसेस काइसेडोको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कथा, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी इक्वेडोरका फुटबलरको इतिहास चित्रण गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी टोलीहरूको लागि ट्रान्सफर लक्षको रूपमा प्रसिद्ध भए। तपाइँलाई मोइजेस कैसेडोको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
मोइस कैसेडो लाइफ स्टोरी।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक हुनुहुन्छ इक्वेडोर सुपरस्टार निर्माणमा। यद्यपि, केवल केहि व्यक्तिहरूले मोइसेस कैसेडोको जीवनी पढेका छन्, जुन निकै आकर्षक छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मोइसेस कैसेडो बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम 'मोई' हो। मोइजेस इसहाक कैसिडो कोरोजो नोभेम्बर २००१ को दोस्रो दिन इक्वेडरको सान्टो डोमिंगो शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ parents० बर्ष भन्दा बढि उमेरका आमा बुबाको लागि जन्मेको थियो।
मोइसेस कैसेडोका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
मोइसेस कैसेडो परिवार मूल:
मोई एक बोनफाइड इक्वेडोरियन हो। वास्तवमा, हाम्रो केटालाई मात्र हेरेर ऊ स्पेनिश भाषा बोल्ने दक्षिण-अमेरिकी भन्दा धेरै अफ्रिकी छ। के तपाईं सहमत हुनुहुन्न? हामी टिप्पणी बाकसमा यो प्रस्तावको लागि वा विरूद्ध तर्कहरूको स्वागत गर्दछौं।
मोइसेस काइसेडो बढ्दो वर्ष:
मिडफिल्डर आफ्नो जन्म शहर मा हुर्कियो। धेरै भन्दा धेरै गिरोहहरूको उपस्थितिको कारण ऊ हुर्किएको छिमेक अलि खतरनाक थियो। यद्यपि उसको परिवारसँग त्यहाँ बस्नुबाहेक अरू विकल्प थिएन।
शहरमा हुर्केका, मोइले फुटबल मन पराउँथे र घाँसबिना मैदानमा खेल्थे। उसको बाल्यकाल सपना इंडिप्याडेन्ट डेल भाले जर्सी लगाउनु थियो। त्यसकारण, उनी प्रायः राती राति घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थे कि परमेश्वरले उसलाई आफ्नो सपना पूरा गर्नमा मद्दत गर्नुहोस्।
मोइसेस कैसेडो इक्वेडरको सान्टो डोमिंगोमा हुर्किए।
मोइसेस कैसेडो परिवार पृष्ठभूमि:
के हामीले उल्लेख गरेका थियौं कि मिडफिल्डरसँग बाल्यकाल सजिलो थिएन? त्यो विकास एक तल्लो वर्गको परिवारको हो भन्ने तथ्यलाई अपरिष्कृत छैन। क्यासेडो मातापिताले उसलाई फुटबल जुत्ता मात्र वहन गर्न सक्थे तर उनलाई धेरै माया थियो।
कसरी करिअर फुटबल Moise Caisedo को लागी शुरू भयो:
गलत जानकारीको विपरित जुन व्यापक छ उहाँ एपोली र लेरा कोलोराडस एससीसँग हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ १ 13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो।
क्यारियर फुटबलमा मोइसेस कैसेडो शुरुआती वर्षः
कालो र ब्लूजको साथ मोइको प्रारम्भिक दिनहरू चुनौतीपूर्ण थिए। वास्तवमा उसले सामना गर्न शाब्दिक संघर्ष गर्यो। केहि बिन्दुमा, उनले आफ्नी आमालाई घर फर्कने मनसायले उनको घनिष्ठ गर्न बोलाए।
भाग्यवस, उनले प्रशिक्षण संयोजक मिगेल एन्जल रामेरेजबाट राम्रो सल्लाह प्राप्त गरे जसले उनलाई असफल हुनु सामान्य कुरा हो तर लगनशीलताले सबैलाई जित्छन्। उनले आफ्नो आँखा संग आफैलाई को सबै भन्दा राम्रो संस्करण बन्न मा सेट संग क्रमबद्ध मा गुलाब को रूप मा सल्लाहकार धेरै राम्रो गरे।
मोइसेस कैसिद्दोले आफ्नो शुरुआती वर्षहरूमा स्वतन्त्रता डेल भेलेमा।
मोइसेस कैसेडो जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
के तपाईंलाई थाहा छ द्रुत गतिमा उत्रने खेलाडी र तिनका टीमका साथीहरूले कोपा मिताद डेल मुन्डो जितेका थिए र एडिडास जेनेरेशन कप फाइनलमा रियल मैड्रिडलाई हराए? अण्डर -२० लिबर्टाडोरस फाइनलमा उनले रिभ प्लेटको बिरूद्ध जीतका लागि आफ्नो पक्षको कप्तान पनि बनाए।
जब कैसेडोले अक्टूबर २०१ 2019 मा लस नेग्र्याज्युलसको लागि शुरुवात गर्‍यो, त्यति थोरै मात्र उसलाई थाहा थियो कि उनी प्रसिद्ध हुन लागेको थियो। आउँदो महिनाहरूमा, उनले ध्यान आकर्षित गरे र डब गरियो इक्वेडरको अंश-कान्ते, भाग-पोग्बा प्रेस र प्रशंसक द्वारा।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, उनले पावल पोग्बा र पछि आफ्नो खेल मोडल गर्छन् एन'गोलो कान्ते.
मोइसेस कैसेडो जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
फुटबल स्टार प्रख्यात एक इन्च नजिक थियो जब उसले इक्वेडरको वरिष्ठ राष्ट्रिय टोलीको लागि १-० २०२२ फिफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइ क्वालिफाइ Argentina अक्टूबरमा अर्जेन्टिनाबाट हरायो। आफ्नो दोस्रो क्वालिफायर खेलमा, कैसेडोले पहिलो गोल U-२ घरको जीतमा उरुग्वेलाई १ October अक्टोबर २०२० मा जित्यो।
गोलको साथ, मोइले तेस्रो सहस्राब्दीमा जन्म भएको पहिलो खेलाडीको रूपमा इतिहास पुस्तकहरू प्रवेश गरे जुन कहिल्यै कन्मेबल विश्व कप क्वालिफाइंगमा स्कोर गर्न सके। मोइसेस चाइल्डहुड स्टोरी र बायोग्राफीमा यो लेख लेख्दा, समाचार शीर्षकहरूमा यो छ कि - म्यान्चेस्टर युनाइटेड मोइसेस कैसेडोलाई हस्ताक्षर गर्न 'पुग्न सम्झौता' गर्दछ.
रेड डेभिलका फ्यानहरूले उनलाई पहिले नै ओल्ड ट्र्याफर्डमा स्वागत गर्दैछन्।
रेडले प्रतिस्थापन गर्न उसको क्षमतामा विश्वास राख्छ पल पोगाबा जो ओल्ड ट्राफर्ड छोड्ने कगारमा छ। हामी विश्वास गर्छौं कि क्यासेडोसँग प्रीमियर लिग स्टार हुन के हुन्छ र अ has्ग्रेजी पक्षले आश्चर्यकर्महरू प्रदर्शन गर्दछ।
मोइस कैसेडो गर्लफ्रेंड को हो?
हाम्रो केटा खुशीको साथ सही व्यक्तिसँग मायामा छ। प्रेमिकाको नाम पाओलिता हो। उनी गोरी छिन् र क्यासेडो उनीलाई भएको सब भन्दा उत्तम चीज मध्ये एक मान्छिन्। उसको अनुसार:
"म मेरो प्रेमिका संग धेरै राम्रो छु। उनी मलाई माया गर्छिन् र सम्मान गर्छिन्। "
क्यासेडोले आफ्नो प्रेमिकालाई कत्ति माया गर्छन भनेर बुझ्न, उनको इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा लभबर्डहरूको पोष्ट छ। फोटोमा क्याप्शन छ - भगवान हाम्रो सम्बन्धलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। ऊ भाग्यशाली छ उसको लागि सही व्यक्ति फेला पारेको छ र हामी उनीहरूलाई शुभकामना दिन्छौं।
मोइसेस कासेडो आफ्नो प्रेमिका, पाउलितासँग।
मोशा क्यासेडो पारिवारिक जीवन:
फुटबल प्रतिभाको एक राम्रो संख्या जस्तै, खेलमा मोइको उदय र महत्वाकांक्षा एक अधिक उद्देश्यको साथ बाँधिएको छ। हामी यसलाई परिवार भन्छौं। मिडफिल्डरको परिवारको बारेमा तथ्यहरू हेर्नुहोस्। साथै, हामी यहाँ उसका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौं।
मोइसेस क्यासेडो आमा बुबा को बारेमा:
मोईका अभिभावकहरू उनीहरूको नामबाट चिनिन सकेका छैनन्। यद्यपि तिनीहरूको प्रतिष्ठा अघि आयो। तीन बर्ष पहिले, खेलाडीले उनीहरुलाई गर्व गर्ने वचन दिए। ठूला-ठूला, उसले त्यो प्रतिज्ञा पूरा गरिसकेका छन।
मोइसेस क्यासेडो आफ्ना माता-पितासँग।
आर्थिक हिसाबले राम्रो नभई, मोइका आमा बुबा आमालाई जवानलाई नैतिक समर्थन प्रदान गर्दै र सफलताको लागि अघि बढाउँदै धनी थिए। उनीहरूको अतुलनीय समर्थनको परिणामले अब फल फलाउँदैछ।
मोइसेस कैसेडो भाई बहिनीहरूको बारेमा:
सोकर मास्ट्रो आफ्ना आमा बुबामा जन्मेका १० बच्चाहरू मध्ये अन्तिम थियो। उनले उल्लेख गरे कि उनका एक जना ठूला भाइ स्वतन्त्रता दिन डेल भेलेको माध्यमबाट गए। स्पष्ट छ, उहाँ एक पेशेवर बन्न असफल भएको हुनुपर्छ। जे होस्, परिवारका नाम प्रख्यात गराउनका लागि भाइबहिनीहरू सबै मोइजको गर्व गर्न आवश्यक छ।
मोइसेस कैसेडो आफ्ना माता-पिता र एक भाईको साथ।
मोइज सम्बन्धका बारे:
फुटबल स्टारको विस्तारित पारिवारिक जीवनमा सर्दै, हामी अझै उसको विस्तारित पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित जानकारीको साथ प्रस्तुत हुन सकेका छैनौं। तसर्थ, हामीसँग उसको हजुरबा हजुरआमा, काका, काकी, भतिजी, र भान्जाभाइको नाम छैन र ती दुई बीचको सम्बन्ध रहेको छ।
मोइस कैसेडो निजी जीवन:
त्यहाँ धेरै तपाईं फुटबल प्रतिभा को बारे मा थाहा छैन आफ्नो उच्च ऊर्जा र खेलको आक्रामक प्रेसिंग शैली asides। ऊ शान्त केटा हो, तर सुस्त वा निन्दनीय मानिन पनि शान्त छैन।
Caisedo ले शान्त मदिरापान गर्दैन र महिलासँग बाहिरै रुचि राख्दैन। ऊ नियमित रूपमा एक पटक छुट्टीहरूमा जान्छ र अन्य रुचिहरू र रुचिहरू हुनै पर्छ जुन उहाँलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा आकारमा राख्छ।
मोइसेस कैसेडो न्यूयोर्कको बिदामा।
मोइसेस कैसेडो लाइफस्टाइल:
आउनुहोस् हामी चर्चा गरौं कसरी फुटबल खेलाडीले बनाउँछ र उसको पैसा खर्च गर्दछ उसको नेटभर्थबाट। दुःखको कुरा, उसको नेट वर्थ अझै पूनरावलोकनमा छ। जे होस्, उसको € 500 को हप्ताको भुक्तान घर लेख्न केहि पनि छैन।
त्यहाँ उसले त्यस्तो भुक्तानी गर्न सक्ने धेरै छैन। आशा छ, जब आखिरमा ओल्ड ट्र्याफर्ड आइपुग्छ, उसले खर्च गर्न सक्ने भन्दा बढी कमाउँछ र शीर्ष उडानको ताराको अंश हेर्न कार र घरहरू जस्ता सम्पत्ति हुन्छ।
मोइसेस कैसेडोका बारे तथ्यहरू:
यस लेखलाई ढाक्न, यहाँ चीजहरू छन् जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ इक्वेडर ब्रेकथ्रू स्टार। तिनीहरू उसको बारेमा अनकही तथ्यहरू हुन्।
($) मा आय
प्रति वर्ष: $ 26,071।
प्रति महिना: $ 2,172।
प्रति हप्ता: $ 500।
प्रति दिन: $ 71।
प्रति घण्टा: $ 2.96।
प्रति मिनेट: $ 0.05
प्रति सेकेन्ड: $ 0.0008
तपाईंले मोइसेस कैसेडोको अवलोकन गर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत इक्वेडरियन जसले प्रतिमहिना 466.63 XNUMX..XNUMX अमेरिकी डलर कमाउँछ उसले Independ महिना र दुई हप्ता काम गर्नुपर्नेछ मोन्डिसको तलब कमाउन इंडिपेन्डियान्ट डेल भेलेमा।
मोइसेस मोशा नामको भिन्नता हो। मिडफिल्डर ईसाई हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनले पिचमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले केहि पटक प्रार्थना गरेको भेटियो। अधिक, उहाँ नियमित रूपमा प्रार्थना र धन्यवादको लागि आफ्नो इन्स्टाग्राममा भगवान उल्लेख गर्नुहुन्छ।
के तपाईं मिडफिल्डर प्रार्थना गर्दै भेट्टाउन सक्नुहुन्छ?
काइसेडोको 62२ को सम्भावितताको साथ समग्र रेटिंग छ। यो रेटिंग कष्टप्रद छ, जबकि क्यासेडोले प्रशंसकको मनपर्ने बन्नको लागि कति काम गर्नु पर्छ भनेर देखाउँदछ। ऊ पक्कै पनि आशाहरु मा बाँच्न हुनेछ।
मोइसेस कैसेडोको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यस जानकारी को टुक्रा पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्छौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न हौसला प्रदान गर्दछ कि दृढता सबैले जीत गर्छ। जस्तो कि क्यासेडोले फेम प्राप्त नगरेसम्म ऊ उत्तम हुन खोज्ने प्रयास गर्न कहिल्यै हरेस खाएन।
मिडफिल्डरका आमा-बुबाको शब्द र कार्यहरूमा उसको क्यारियरमा उनीहरूले गरेको समर्थनको लागि अब हामी उनीहरूको प्रशंसा गर्छौं। Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाइँ केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: मोइसेस इसहाक काइसेडो कोरोजो।
जन्म मिति: नोभेम्बर २००१ को दोस्रो दिन।
जन्मस्थान: इक्वेडर मा सान्तो डोमिन्गो को शहर।
फिटमा उचाई: Fe फीट, In ईन्च
सेमी मा उचाई: 178 सेमी।
अभिभावक: N /
Siblings: N /
प्रेमिका: N /
रुचि: भ्याकेसन र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय खर्च गर्दै।